गफ ! .....: गीत , तिमी र म
अहो गीत, काली, कालीको मिठो स्वर अनि देवको भावना र कालीको सोधाई मिठो लाग्यो दीपकजी। खै तपाईले भनेझै यहाँ त समयको परिधि खासै देखिन्न क्यारे। यो त जहिले नि जोसुकैको जीवनमा लागू हुन्छ नि हैन र?
मेरो त गला नै अबरुद्द भो तपाईंको हिर्दयस्पी लेख र गीत पढेर दिपक जि । प्रा र्थना गर्दछु तपाईंलाई गीत - गजल -कबिता मार्फत सधैं पढ्न पाइयोस ।कामना गर्दछु तपाईंको बर्तमान मधुर गीत म य होस् ।
दिपक जि !मेरो यो थोरै हरफ तपाईंको उनलाई जो बर्तमान मा हुनुहुन्छ ।
( यहाँ हरफ मा तिमी भनेर सम्बोधन भएको छ , म लेख्दा खेरी असाध्यै भाबुक भएर लेख्छु , त्यती खेर जो पनि मेरो हिर्दयको नजिक हुन्छ र म तिमी सम्बोधन गर्छु । यहाँ यस्तै भएको छ )
उु भन्छ जिबन भ्रम
उु यतार्थ मा छैन
जिबन भ्रम भए पनि
यथार्थ भ्रम छैन --
उु दुखेको छ बिछ्ट्टै
मल्हम बनिदेउ तिमी
उु टुटेको छ बिछ्ट्टै
आधार बनिदेउ तिमी
सम्हाल उस्लाई तिमीले
अ गाल उस्लाई तिमीले
मायालु भाबमा ।
उु गीत जिबनको
उु प्रित गीत को
तिमी धुन बासुरिको
तिमी जून उन्को मनको ।
जडित जि नमस्कार.. तपाइको साहित्यमा पाइला राख्न पुगेको छु ।आसा छ गोरेटो खुल्ला छ । अनि कालिसंगको त्यो रमाइलो क्षण निकै भावनात्मक लाग्यो। लेखाइ कुनै साहित्यकारको भन्दा कमि छैन जस्तो लाग्छ मलाइ त । अझ प्रगतिको कामना....
भावनात्मक मानव संबेदनाको छुट्टै प्रस्तुती !!
सिकारु जीले भने जस्तै यो प्रस्तुती प्रशंसा योग्य र उच्चकोटीको लाग्यो ।
तपाईंका यी भावनाहरुले
च्वास्स छोयो अन्तर हृदयमा।
नचाहदा नचाहदै पनि जिन्दगीमा
तिता मिठा स्पर्षहरु बर्षी दिदारहेछन
अचानक र अन्जानमै।
गीतमा उनिएको यो प्रणयरसको माला
भनिन्छ नओइलिवस तर...
कैलाशजी , भूतले खाजा खाएकोबेलामा म त्यो समयमा थिएँ यहाँ खुलाईरहनु आवश्यक नपरी टरेछ । स्पस्ट भन्दा मैले सजाय पाएको बखत गीत लेख्दाको कुरा लेखिरहँदा भूतले खाजा खाँदैथियो । धन्यवाद तपाईंको प्रतिक्रियाको निंती , वास्तवमै सामान्य कुरा भनेर हेर्छु म त यस्ता कुराहरुलाई र पनि बेलाबेला ख्याल नगरे सानातिना कुराले नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने लागेर नै यो बिधी गन्थन कोरेर गन्गने भएको हुँ ।
लुनाजी , तपाईंको शुभेच्छा सँधै पाईरहुँ । मेहनत गरेर गीत लेखिदिनु भएकोमा आभारी छु । तपाईंको यो प्रयासले पनि सघायो मलाई ।
सिकारुजी , हार्दिक स्वागत तपाईंको पदार्पणलाई । मेरो साहित्य संसार भनेर आफ्नै मात्र रचना एवँ गन्थन मन्थन राख्ने गरेको भएपनि सकेसम्म सबैको शुभेच्छा लिएर , विचार साटेर हिँड्न चाहन्छु म । यो गोरेटो एक्लै हिँड्ने हुँदै होईन - हातेमालो गर्दै , सिक्दै बुझ्दै सबै हिँडौं । प्रतिक्रिया पाउंदा हर्षित छु - धन्यवाद !
दिलीपजी , यो गन्थनमा पनि लेखेछु केहि भन्ने लाग्यो । धन्यवाद !
विमलजी , तपाईंको शुभेच्छा पनि सँधै साथ रहिरहोस् । धन्यवाद !
जडित जी सबैले राम्रो भने भनेर राम्रै भन्नु पर्छ भन्ने छैन तर के गर्नु राम्रो कुरा लाइ राम्रो भन्नै पर्दों रहेछ । त्यही हाल भो मेरो पनी । पर्यावाची शब्द जस्तै रहेछ गीत र तपाई साची भनेको । आफु संगै अरुलाई पनी हराउन सक्नु भएको छ । कति जाती ।
देव र कालीबीचको आत्मीय सम्बोधनसँगै तपाईँको गीति सरगर्मी पनि प्रगाढ भएर आएको पाइयो । यो अनुभूतिको जराले तपाईँभित्रको संवेदनशीलताको फैलावटलाई सतहमा ल्याएको छ । कल्पनाशीलताको वहाब पनि भरपूर छ । तपाईँको गीति जागरणले आजको जस्तै र यसभन्दा उपल्लो कोमलता/गहिरो प्रभाव देखाउँदै जाओस् ।
वहारसँगै उड्यो मन…. बोलको गीत मेरो ठम्याइमा जहाँसम्म लाग्छ गायिका रीजा उप्रेतीको स्वर हो ।